Ogaden News Agency (ONA) – Sanetka Maraykanka oo Ansixinaya Qaanuunka Canshuur Dhimista.
Sanetka Maraykanka oo Ansixinaya Qaanuunka Canshuur Dhimista.
Aqalka Senetka ee Maraykanka ayaa meel mariyay sharci canshuur dhimis ah, kaasoo dhabbaha u xaadhaya guushii ugu horraysay ee Donald Trump uu ka gaadho dhanka sharci dajinta. Sharcigan waxaa lagu ansixiyey 51 iyo 49, ka dib markii isbaddallo is daba joog ah lagu sameeyay.
Qorshahan ayaa canshuur badan ka jaraya shirkadaha waawayn, laakin baaritaan uu sameeyay guddi ka tirsan senetka ayaa lagu ogaaday in 11 Trilyan oo dollar uu ku kordhinayo hoos u dhaca miisaaniyadda. Trump ayaa doonaya in tallaabooyinkan oo ah kuwii ugu weynaa ee dhinaca canshuuraha ee Maraykanka tan iyo sideetameeyadii in sharci rasmi ah laga dhigo wixii loo gaadho dhamaadka sannadka.
Senetka haddaba hawsha u taalla ayaa ah inuu is waafajiyo sharciga cusub iyo sharci bishii hore uu meel mariyey aqalka wakiillada. Sharcigaas labada sharci ka kooban ayaa la hor dhigi doonaa madaxweynaha si uu rasmi ahaan ugu saxiixo oo uu sharci u noqdo.
Mudanaha kaliya ee ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ee diiday meel marinta sharcigan cusub ee lagu dhimayo canshuuraha ayaa ah Bob Corcker. “Ma samayn karo in aan dhinac iska dhigo walwalkayga ku aaddan miisaaniyadda oo aan u codeeyo sharci sii fogaynaya culayska dusha ka fuulaya jiilasha soo socda” ayuu yidhi.
Khamiistii ayaa guddi wadajir ah oo Senetka u qaabilsan arrimaha canshuuraha wuxuu ogaaday in sharciga jaridda canshuuraha iyo shaqooyinka uu yahay mid sii kordhinaya hoos u dhaca dhaqaalaha Federaalka muddo 10 sano ah. Warbixinta ayaa ka hor timid oo khilaafsan doodda aqalka cad ee ah in koboca dhaqaale uu yahay mid daboolaya canshuuraha la jaray.